Smile Asia Myanmar Mission 2019 Fundraiser | Brighter Future Myanmar Foundation
Smile Asia Myanmar Mission 2019 Fundraiser
KBZ Bank’s CEO, Mike DeNoma, is set to run the Moab 238 — one of the longest races in the world — to raise awareness for children born with cleft lips and palates in Myanmar. Mike will be pushing himself to the limit as he intends to do his part and contribute back to the community.
From 12 to 16 October 2018, Mike will race acrossagrueling 238.3 miles over the course of 4.5 days. DeNoma is looking to raise US$42,000, which will enable another Smile Asia mission in Myanmar, allowing 100 more children born with cleft to undergo corrective surgeries.
According to Smile Asia, 1 in 500 children are born with cleft in Myanmar, with approximately 2,000 children born with cleft lips or palate annually. And there are 50,000 children are still living with cleft lips or palate and yet to be operated. KBZ Group, KBZ Bank, and Brighter Future Myanmar, in partnership with Singapore’s Smile Asia, have previously sponsored five successful rounds of cleft lip and palate surgeries in Myanmar, impacting the lives of 449 children.
Please visit the following link to donate https://gogetfunding.com/run-for-smiles/
For those living in Myanmar, we have enabled donations via KBZPay. You can scan the Brighter Future Myanmar Foundation’s QR Code below using your KBZPay app to donate any amount you like. All donations via KBZPay is denominated in Myanmar Kyat.
ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr. Mike DeNoma မှ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်၍ ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာလ (၁၂)ရက်မှ (၁၆)ရက်အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး ၂၃၈မိုင် တာဝေးအပြေးပြိုင်ပွဲ (Moab 238 Endurance Run) တွင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မွေးရာပါ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ်များအတွက် Fundraising ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Mr. DeNoma မှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ် (၁၀၀) အား ခွဲစိပ်ကုသနိုင်ရန် လိုအပ်သော ရန်ပုံငွေ (USD 42,000) ရရှိရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး လှူဒါန်းငွေများကို Smile Asia Myanmar Mission 2019 သို့ တိုက်ရိုက် လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
Smile Asia မှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလေးငယ် ၅၀၀ ဦးတွင် ၁ ဦးမှာ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ဝေဒနာဖြင့် မွေးဖွားလာရပြီး တစ်နှစ်လျှင် နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ်ပေါင်း ၂,၀၀၀ ခန့် ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ယခု လက်ရှိတွင်လည်း ကလေးငယ်ပေါင်း ၅၀,၀၀၀ ခန့် နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ဝေဒနာ ကို ခွဲစိတ်ကုသရန် လိုအပ်နေပါသည်။ ကမ္ဘောဇအုပ်စု၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်နှင့် ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်း မြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းတို့မှ စင်ကာပူနိုင်ငံ Smile Asia အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံ တ၀ှမ်းလုံးရှိ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ဝေဒနာရှင် ကလေးများအတွက် ခွဲစိတ်ကုသမှုပေါင်း ငါးကြိမ်တိုင်တိုင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကလေးငယ်ပေါင်း ၄၄၉ ဦးကို အခမဲ့ ခွဲစိတ် ကုသပေးနိုင်ခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
လှူဒါန်းမှုအတွက် ယခုလင်ခ့်သို့ ဝင်ရောက်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ https://gogetfunding.com/run-for-smiles/
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပါက KBZPay မှတဆင့်လှူဒါန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြပါ အနာဂတ်အလင်းတန်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ QR Code ကို KBZPay App ဖြင့် scan ဖတ်ပြီး လှူဒါန်းလိုသည့်ပမာဏကို ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ KBZPay မှလှူဒါန်းငွေအားလုံး၏ တန်ဖိုးသည် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်သာဖြစ်ပါသည်။
You can track Mike’s run here: http://www.moab200.com/2017-moab-live.html
Smile Asia isaglobal alliance of independent charities working together to treat facial deformities like cleft lip and cleft palate. We raise standards of medical care by exchange of best practices and enabling opportunities of collaborative education. Asagroup, we have delivered over 100,000 free medical evaluations and 70,000 surgeries across Asia with the participation of over 1,500 volunteers from all over the world. Smile Asia has activities across 20 countries now. We have programmatic activities in Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, India, Indonesia, Laos, Mongolia, Myanmar, Philippines, Thailand, Timor-Leste and Uzbekistan. We also have resource generation activities in Hong Kong, Japan, Macau, Malaysia, Singapore, South Korea and the United States.
Scan to donate with KBZPay